iHome Amplifier - iHome ► Shopping Time
မူလသို > အရစ်ကျဝယ်ယူနိုင်သောပစ္စည်းများ>ⒽⓅ ► လျှပ်စစ်ပစ္စည်း>စပီကာ နှင့် အသံချဲ့စက်
ကုန်ပစ္စည်း 52 ခု ရှိပါသည်
Pa Dj Mixer
5 Core အမှတ်တံဆိပ် Pa Dj Mixer ( Model No - DJMX-1400 ) S/N ratio: 85dB 40 seconds voltages supply With USB,Full ID3 display Frequency response: 20Hz-20KHz
YAMAHA အမှတ်တံဆိပ် PACKAGE SPEAKER ( NS-P285 ) (1) အသံထွက် ရှင်းလင်းပြတ်သားခြင်း။ (2) မှန်ကန်သော အရေအသွေးများဖြင့် ပြုလုပ်ထားခြင်း။ (3) အရေအသွေးမြင့်မားသောကြောင့် ယုံကြည်စိတ်ချမှူရှိခြင်း။ (4) Japan နိုင်ငံမှထုတ်လုပ်ထားပြီး အရေအသွေးကောင်းမွန်ခြင်း။
YAMAHA အမှတ်တံဆိပ် Amplifier ( RX-V 467 ) (1) အသံထွက် ရှင်းလင်းပြတ်သားခြင်း။ (2) မှန်ကန်သော အရေအသွေးများဖြင့် ပြုလုပ်ထားခြင်း။ (3) အရေအသွေးမြင့်မားသောကြောင့် ယုံကြည်စိတ်ချမှူရှိခြင်း။
YAMAHA အမှတ်တံဆိပ် SPEAKER ( NS-F50)(1) အသံထွက် ရှင်းလင်းပြတ်သားခြင်း။(2) မှန်ကန်သော အရေအသွေးများဖြင့် ပြုလုပ်ထားခြင်း။(3) အရေအသွေးမြင့်မားသောကြောင့် ယုံကြည်စိတ်ချမှူရှိခြင်း။(4) Japan နိုင်ငံမှထုတ်လုပ်ထားပြီး အရေအသွေးကောင်းမွန်ခြင်း။
YAMAHA အမှတ်တံဆိပ် YAMAHA SPEAKER ( NS-333 )(1) အသံထွက် ရှင်းလင်းပြတ်သားခြင်း။(2) မှန်ကန်သော အရေအသွေးများဖြင့် ပြုလုပ်ထားခြင်း။(3) အရေအသွေးမြင့်မားသောကြောင့် ယုံကြည်စိတ်ချမှူရှိခြင်း။(4) Japan နိုင်ငံမှထုတ်လုပ်ထားပြီး အရေအသွေးကောင်းမွန်ခြင်း။
YAMAHA အမှတ်တံဆိပ် Portable Speaker (NX-P 100 ) (1) အရေအသွေးကောင်းမွန်ခြင်း။ (2) အသံပိုင်းဆိုင်ရာ ကြည်လင်ပြတ်သားခြင်း။ (3) မှန်ကန်ကောင်းမွန်တဲ့အပြင် ကြာရှည်စွာအသုံးပြုခံခြင်း။ (4) Mobile Phone Bluetooth များနဲ့လည်း လွယ်ကူစွာဖွင့်ယူနားဆင်နိုင်ခြင်း။ (5) Japan Made ဖြစ်တဲ့အတွက်အရေအသွေးကောင်းပြီး ကြာရှည်အသုံးခံခြင်း။
Pa Dj Mixer ( DJM - 900 )
5 Core အမှတ်တံဆိပ် Pa Dj Mixer ( DJM - 900 ) 1. Excellent computer connectivity , up-to-date effects and high performance features 2. High performance channel faders 3. Scratch Feature
YAMAHA အမှတ်တံဆိပ် Speaker (NS-P20 ) (1) အရေအသွေးကောင်းမွန်ခြင်း။ (2) အသံပိုင်းဆိုင်ရာ ကြည်လင်ပြတ်သားခြင်း။ (3) မှန်ကန်ကောင်းမွန်တဲ့အပြင် ကြာရှည်စွာအသုံးပြုခံခြင်း။ (4) Mobile Phone Bluetooth များနဲ့လည်း လွယ်ကူစွာဖွင့်ယူနားဆင်နိုင်ခြင်း။ (5) Japan Made ဖြစ်တဲ့အတွက်အရေအသွေးကောင်းပြီး ကြာရှည်အသုံးခံခြင်း။
YAMAHA အမှတ်တံဆိပ် SPEAKER ( NS-F140)(1) အသံထွက် ရှင်းလင်းပြတ်သားခြင်း။(2) မှန်ကန်သော အရေအသွေးများဖြင့် ပြုလုပ်ထားခြင်း။(3) အရေအသွေးမြင့်မားသောကြောင့် ယုံကြည်စိတ်ချမှူရှိခြင်း။(4) Japan နိုင်ငံမှထုတ်လုပ်ထားပြီး အရေအသွေးကောင်းမွန်ခြင်း။
YAMAHA အမှတ်တံဆိပ် DESKTOP AUDIO SYSTEM ( TSX-70 ) (1) အသံထွက် ရှင်းလင်းပြတ်သားခြင်း။ (2) မှန်ကန်သော အရေအသွေးများဖြင့် ပြုလုပ်ထားခြင်း။ (3) အရေအသွေးမြင့်မားသောကြောင့် ယုံကြည်စိတ်ချမှူရှိခြင်း။ (4) Japan နိုင်ငံမှထုတ်လုပ်ထားပြီး အရေအသွေးကောင်းမွန်ခြင်း။
YAMAHA အမှတ်တံဆိပ် SPEAKER ( NS-C500)(1) အသံထွက် ရှင်းလင်းပြတ်သားခြင်း။(2) မှန်ကန်သော အရေအသွေးများဖြင့် ပြုလုပ်ထားခြင်း။(3) အရေအသွေးမြင့်မားသောကြောင့် ယုံကြည်စိတ်ချမှူရှိခြင်း။(4) Japan နိုင်ငံမှထုတ်လုပ်ထားပြီး အရေအသွေးကောင်းမွန်ခြင်း။
YAMAHA အမှတ်တံဆိပ် SPEAKER ( NS-310B)(1) အသံထွက် ရှင်းလင်းပြတ်သားခြင်း။(2) မှန်ကန်သော အရေအသွေးများဖြင့် ပြုလုပ်ထားခြင်း။(3) အရေအသွေးမြင့်မားသောကြောင့် ယုံကြည်စိတ်ချမှူရှိခြင်း။(4) Japan နိုင်ငံမှထုတ်လုပ်ထားပြီး အရေအသွေးကောင်းမွန်ခြင်း။
YAMAHA အမှတ်တံဆိပ် Amplifier ( RX-V 567 ) (1) အသံထွက် ရှင်းလင်းပြတ်သားခြင်း။ (2) မှန်ကန်သော အရေအသွေးများဖြင့် ပြုလုပ်ထားခြင်း။ (3) အရေအသွေးမြင့်မားသောကြောင့် ယုံကြည်စိတ်ချမှူရှိခြင်း။ (4) Japan နိုင်ငံမှထုတ်လုပ်ထားပြီး အရေအသွေးကောင်းမွန်ခြင်း။
YAMAHA အမှတ်တံဆိပ် SPEAKER ( NS-8390)(1) အသံထွက် ရှင်းလင်းပြတ်သားခြင်း။(2) မှန်ကန်သော အရေအသွေးများဖြင့် ပြုလုပ်ထားခြင်း။(3) အရေအသွေးမြင့်မားသောကြောင့် ယုံကြည်စိတ်ချမှူရှိခြင်း။(4) Japan နိုင်ငံမှထုတ်လုပ်ထားပြီး အရေအသွေးကောင်းမွန်ခြင်း။
YAMAHA အမှတ်တံဆိပ် Amplifier ( CD-S300 ) (1) အသံထွက် ရှင်းလင်းပြတ်သားခြင်း။ (2) မှန်ကန်သော အရေအသွေးများဖြင့် ပြုလုပ်ထားခြင်း။ (3) အရေအသွေးမြင့်မားသောကြောင့် ယုံကြည်စိတ်ချမှူရှိခြင်း။ (4) Japan နိုင်ငံမှထုတ်လုပ်ထားပြီး အရေအသွေးကောင်းမွန်ခြင်း။
YAMAHA အမှတ်တံဆိပ် Amplifier ( R-S300 ) (1) အသံထွက် ရှင်းလင်းပြတ်သားခြင်း။ (2) မှန်ကန်သော အရေအသွေးများဖြင့် ပြုလုပ်ထားခြင်း။ (3) အရေအသွေးမြင့်မားသောကြောင့် ယုံကြည်စိတ်ချမှူရှိခြင်း။ (4) Japan နိုင်ငံမှထုတ်လုပ်ထားပြီး အရေအသွေးကောင်းမွန်ခြင်း။
Pa Dj Mixer ( DJM-600 (USB) )
5 Core အမှတ်တံဆိပ် Pa Dj Mixer ( DJM-600 (USB) ) 1. Excellent computer connectivity , up-to-date effects and high performance features 2. High performance channel faders 3. Scratch Feature
YAMAHA အမှတ်တံဆိပ် Amplifier ( CD-C600 ) (1) အသံထွက် ရှင်းလင်းပြတ်သားခြင်း။ (2) မှန်ကန်သော အရေအသွေးများဖြင့် ပြုလုပ်ထားခြင်း။ (3) အရေအသွေးမြင့်မားသောကြောင့် ယုံကြည်စိတ်ချမှူရှိခြင်း။ (4) Japan နိုင်ငံမှထုတ်လုပ်ထားပြီး အရေအသွေးကောင်းမွန်ခြင်း။
YAMAHA အမှတ်တံဆိပ် Amplifier ( A-S 500 ) (1) အသံထွက် ရှင်းလင်းပြတ်သားခြင်း။ (2) မှန်ကန်သော အရေအသွေးများဖြင့် ပြုလုပ်ထားခြင်း။ (3) အရေအသွေးမြင့်မားသောကြောင့် ယုံကြည်စိတ်ချမှူရှိခြင်း။ (4) Japan နိုင်ငံမှထုတ်လုပ်ထားပြီး အရေအသွေးကောင်းမွန်ခြင်း။
Pa Dj Mixer ( DJMX - 1300 )
5 Core အမှတ်တံဆိပ် Pa Dj Mixer ( Model No - DJMX-1300 ) 100-240V power supply Anti-shock system (40 seconds ) Frequency response: 20Hz -20KHz Single and continuous play mode With USB play function
YAMAHA Sound Box ( NS-AW 992 ) (1) အရေအသွေးမြင့်ပြီး ကြာရှည်အသုံးခံခြင်း။ (2) အသံထွက် ရှင်းလင်းပြတ်သားခြင်း။ (3) ကောင်းမွန်သော အရေအသွေးများဖြင့် ပြုလုပ်ထားခြင်း။ (4) JAPAN နိုင်ငံထုတ်ဖြစ်ပြီး အရေအသွေးစိတ်ချရခြင်း။
YAMAHA အမှတ်တံဆိပ် SPEAKER ( NS-C700)(1) အသံထွက် ရှင်းလင်းပြတ်သားခြင်း။(2) မှန်ကန်သော အရေအသွေးများဖြင့် ပြုလုပ်ထားခြင်း။(3) အရေအသွေးမြင့်မားသောကြောင့် ယုံကြည်စိတ်ချမှူရှိခြင်း။(4) Japan နိုင်ငံမှထုတ်လုပ်ထားပြီး အရေအသွေးကောင်းမွန်ခြင်း။
YAMAHA အမှတ်တံဆိပ် Amplifier ( R-S500 ) (1) အသံထွက် ရှင်းလင်းပြတ်သားခြင်း။ (2) မှန်ကန်သော အရေအသွေးများဖြင့် ပြုလုပ်ထားခြင်း။ (3) အရေအသွေးမြင့်မားသောကြောင့် ယုံကြည်စိတ်ချမှူရှိခြင်း။ (4) Japan နိုင်ငံမှထုတ်လုပ်ထားပြီး အရေအသွေးကောင်းမွန်ခြင်း။
YAMAHA အမှတ်တံဆိပ် Amplifier ( RX-V 667 ) (1) အသံထွက် ရှင်းလင်းပြတ်သားခြင်း။ (2) မှန်ကန်သော အရေအသွေးများဖြင့် ပြုလုပ်ထားခြင်း။ (3) အရေအသွေးမြင့်မားသောကြောင့် ယုံကြည်စိတ်ချမှူရှိခြင်း။ (4) Japan နိုင်ငံမှထုတ်လုပ်ထားပြီး အရေအသွေးကောင်းမွန်ခြင်း။